Ethiopia oo taageero nooceeda cusub u bilaawday M/weyne Farmaajo - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Ethiopia oo taageero nooceeda cusub u bilaawday M/weyne Farmaajo
Warar si hoose nooga soo gaaray Magalaada Jig Jiga ayaa sheegeysa in Madaxweynaha DDS Mudane Mustafa Cagjir uu casuumado u diraay Wariyayaal & kuwa caanka ka ah baraha bulshada asagoo fulinaayo Amar uga yimid Xafiirska Raisal Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed.
Sida aan xogta ku helay M/weyne Farmaajo oo soo wajahday dhaqaalle Xumi Dowladiisa & culeesyo siyaasadeed ayaa Codsi u dirsaday Raisal Wasaare Abiy si looga taageero qarashaadka ku baxa warbaahinta kuwaaso lasiiyo Wariyayaasha , Culimada & dhalinyarada u qaabilsan Media.
Raisal Wasaare Abiy oo fulinaya Codsiga Saaxiibkiis M/weyne Farmaajo ayaa amray Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjir in uu bixiyo dhamaan qarashaadka ku baxayaa taageeradaMedia ee Dowlada farmaajo 3 bilood ee soo socoto taaso lagu guda jiro waqtiga qabashada doorasho.
Madaxweyne Mustafa Cagjir ayaa Casuumad udiray inta badan wariyayaasha kuna soo daray kooxo cusub oo horay caan uga ahaa aflaagaada Dowlada Somaliland oo iyada iskeed ugu dhawaaqday badaxbanaanida .
Dadka kafaalooda Arrimaha Siyaasada ayaa ku micneeyay Doorka Ethiopia ee Soomaaliya uu kusoo koobmay kaliya taageerada dhinaca farsamo isla markaasna lahakiyay tagerada dhinaca military oo ay siin jirtay Madaxweyne farmaajo taaso losababeeyay cadaadiska beesha caalamka ku heeso .